Adeegsiga Muuqaalka si aad ugu kala qaaddo Faylka waaweyn ee PST faylalka yaryar - Tilmaam Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Adeegsiga Muuqaalka si aad ugu kala qaaddo Faylka waaweyn ee PST kuwa yaryar
Adeegsiga Muuqaalka si aad ugu kala qaaddo Faylka waaweyn ee PST kuwa yaryar
Laga soo bilaabo Muuqaalka 2003, waxaa suurtagal ah in la maareeyo faylal badan oo PST ah oo ku yaal qaybta bidix ee bidix ee Muuqaalka, markaa waxaad u adeegsan kartaa Muuqaalka inaad u kala qaybiso fayl weyn oo PST dhowr ah oo yaryar, sida soo socota:
Ugu horreyntii, samee nuqul faylkaaga weyn ee PST ee asalka u ah nabadgelyada dartiis.
Kadib waxaad ubaahantahay inaad ogaato cabirka feylka weyn ee PST iyo qiyaasta tirada feylasha laqeybsamay ee aad rabto inaad sameysid si aad uhesho waxyaabaha kujira faylka weyn ee PST.
Hubso in faylka asalka ah ee waaweyn ee PST la furay oo laga heli karo qaybta bidix ee marinka.
Abuur dhowr faylal PST ah oo madhan sida faylasha kala jaban. Faylashaan sidoo kale waa in laga heli karaa qeybta bidix ee jihada.
Qiyaasta qayb ka mid ah walxaha aad rabto inaad geliso faylka qaybsan ee ugu horreeya, ka dibna ku xulo feylka weyn ee PST, ka dibna u wareeji feylka qaybsan ee ugu horreeya.
Hubi cabirka faylka kala-baxa koowaad. Haddii cabirkeedu hagaagsan yahay, markaa waad ku sii wadi kartaa feylka xiga ee loo kala qaybiyey, haddii kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad waxyaabo kale oo badan ka wareejiso faylka weyn ee PST una gudub faylka ugu horreeya mar labaad.
Ku celi tallaabada 7 illaa cabirka faylka kala-baxa koowaad uu ka gaaro cabirka la filayo.
Kadib waxaad dhameysay feylkii u horeeyay ee qeybta ahaa waana inaad tagtaa midka xiga.
Ku celi tallaabada 6 illaa 9 illaa dhammaan walxaha ku jira faylka weyn ee PST loo wareejiyo faylasha kala jaban.
Waxaa jira xoogaa faa'iido daro ah adeegsiga Muuqaalka si loo kala qaybiyo feyl weyn oo PST ah:
Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya ayaa taageera in sidaas la sameeyo. Wixii Muuqaalka ah ee 2002 ama qoraallada hoose, maaddaama uusan isticmaaluhu heli karin waxa ku jira dhowr faylal PST ah isla waqtigaas, uma kala qaybsami kartid nidaamka kor ku xusan.
Waa inaad awood u yeelatid inaad ka heli karto waxyaabaha ku jira faylka weyn ee PST ee ka soo baxa Muuqaalka. Haddii faylkaaga PST musuqmaasuq yahay ama aan la furi karin sababta oo ah 2GB dhibaatada weyn, markaa ma isticmaali kartid habka kor ku xusan.
Way yar adag tahay in la xakameeyo cabirka faylka PST kala jaban. Waxaad u baahan tahay inaad isku daydo marar badan illaa ay ka buuxineyso shuruudahaaga.
Iyadoo DataNumen Outlook Repair, waxaad u kala qaybin kartaa feylka weyn ee PST kuwa yaryar si otomaatig ah, adigoon ka walwalaynin dhammaan cilladaha kor ku xusan.